जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको - Nepal Post Daily
ओली सरकारको पतनसँगै गठन भएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग जनताले धेरै आशा राखेका थिए । फास्ट ट्याकमा सरकारलाई पुर्णता दिएर कोरोना खोप जन जनमा पु¥याउने तथा थला परेको सबै क्षेत्रलाई सहि गति प्रदान गर्ने यो सरकारको दायित्व थियो । प्रधानमन्त्री बनी सकेपछि शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता नेपाली जनतालाई कोरोनाको खोप दिलाउनु नै रहेको उद्घोष गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय सरकारको गति हेरेर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भान नेपाली जनतालाई हुन थालेको छ ।
सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा हाल सम्म सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । नेताहरु जनताको सेवा र विकास भन्दा पनि मन्त्री बन्न हतारो गरेको देखेर नेपाली जनता खिन्न छन् । सबै नेपालीले खोप कहिले पाउने हो ? अहिले सम्म कुनै ठेगान छैन । देशलाई मैले के दिए ? भन्ने सोच्न नेता कुनै पनि पार्टीमा छैनन् ।
सबै पार्टीका हाई–कमानका नेताहरुलाई टाउको दुखाई छ । गठबन्धनको सरकार भएको कारण पार्टीहरुले पाउने मन्त्री संख्या कम छ । तर, अकांक्षीहरु धेरै छन् । पार्टीहरुमा यस्तो संस्कृति देखेर सबै पार्टीका अध्यक्षहरु पनि खिन्न छन् । तर, जनतालाई यी सब कुरा भन्दा पनि सरकारको पुर्णता र कोरोनाको खोप चाहिएको छ । विज्ञहरुको अनुसार कोरोनाको तेस्रो लहर टरेको छैन । सरकारलाई त्यसको तयारीमा जुट्नु पर्ने हो । तर, सरकारलाई मन्त्रीमण्डल विस्तारमै सकस छ ।
सरकारलाई सहयोग गर्ने भनेर आश्वासन दिएका पार्टीका नेताहरुले आफ्ना पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरुको नाम पनि दिन नसक्नुले यो सरकारको लोकप्रियता घट्न थालेको छ ।
चुनावको मुखमा यसरी सरकार अलोकप्रिय बन्नु न त सरकारको नेतृत्व गरी रहेको पार्टीको लागि ठिक छ न त सरकारमा सहभागी भएका दलहरुको लागि नै ठिक छ । हालको सरकारले राम्ररी काम गर्न सकेन भने अगामी चुनावमा त्यसको परिणाम राम्रो नहुने पक्का छ । त्यस कारण यस विषयमा सरकारको नेतृत्व गरी रहेको नेपाली कांग्रेस तथा सरकारमा सहभागी दल माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी कसैको लागि राम्रो नहुने पक्का छ ।
अतः यस विषयमा र आफुले गरेको वाचाको विषयमा यो सरकार गम्भीर हुनु पर्ने देखिन्छ ।
Previous articleजगदम्बामा भएको तोडफोडप्रति महासंघको आपत्ती !
Next articleनेकपा एमाले नेपाल समूहको समानान्तर कमिटी नै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा रुपान्तरण